Iphepha lokudlulisa iDijithali kunye noMboneleli weFlex wokuTshintshela ngobushushu |Alizarin
Iminyaka eyi-17 yamava kwishishini
10000㎡ Indawo yeFactory
20000 square metres imveliso yonyaka
I-Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.
I-Fuzhou Alizarin Coating co., Ltd, yasekwa ngo-2004, ngumenzi we-inkjet kunye nombala we-laser owamkelayo wokwaleka kunye nee-inkjet ze-inkjet, i-laser yemibala ye-laser kunye ne-plotter yokusika.Ishishini lethu elingundoqo ligxile kwimveliso yomgangatho ophezulu, amaphepha enkcazo-ntetho adityanisiweyo kunye neefilimu kwiindidi ezahlukeneyo, ukusuka kwimidiya ye-inkjet, i-Eco-solvent inkjet media, i-Mild solvent media ye-inkjet, imidiya ye-inkjet yokumelana namanzi ukuya kwiphepha lokudlulisa inkjet, umbala. iphepha lokudlulisa ngelaser, i-Eco-Solvent Printable Flex kunye neSika itafile yePolyurethane Flex njl. Kwaye sinobuchule obubanzi…
Izigaba kunye neeMbasa
IFuzhou Alizarin Coating Co., Ltd. yasekwa.Kwangalo nyaka, iphepha lokudluliselwa kwe-inkjet lasungulwa, eyayiyinkampani yokuqala e-China ukukhuthaza ngempumelelo isicelo sayo.
I-Eco-Solvent eprintayo iPU flex yeza kwimarike.
Iphepha lokudlulisa iLaser yombala laziswa kwimarike ngaxeshanye.
Iimveliso zefilimu ezisikiweyo zePU ezikumgangatho ophezulu ziyakhuthazwa ekhaya nakwamanye amazwe.
Ukuthengwa komhlaba wemizimveliso ongaphezulu kweemitha ezili-10,000
Lo mzi-mveliso ufuduselwe kumzi-mveliso omtsha, omkhulu ngokuphindwe kayi-6 kunowokuqala.
Iimveliso ze-Economical cuttable PU flex series zaziswa kwiimarike zaphesheya.
Umzi-mveliso weFuzhou Alizarin Coating Co., Ltd uphumelele iwonga leFujian High-tech Enterprise
Sibonelela ngeePrettyStickers HTS-300SRF eprintayo ebonakalisa iPU Flex kwiimpahla ezimibalabala zoMsebenzi, unokonyusa ukubonakala kunye nomaleko webala elikhanyayo kwimpahla yakho yoMsebenzi phantsi kokukhanyisa.
Abashicileli: Abashicileli be-inkjet be-Eco-Solvent / abashicileli be-inkjet be-HP Latex / abashicileli be-inkjet be-UV
Umsiki: Zonke iintlobo ze-vinyl yokusika iplotter
Ukushisa Ukushisa: 150 ~ 165 ° C kunye ne-15 ~ 25sec
Ilaphu: I-100% ye-cotton, i-cotton kunye ne-polyester blend, i-100% ye-canvas ye-cotton, i-leather yokwenziwa njl.
I-HTGD-300 yimathiriyeli yefoto-chromic enokukhanya kwisiseko esimnyama kwi-170 micron liner yephepha enokupeyintwa ngeekhrayoni ze-wax, iipastels ze-oyile, iziphawuli ze-fluorescent, ipensile yombala, kwaye iprintwe ngabashicileli bejethi be-inki eqhelekileyo...
I-Eco-Solvent Metallic Printable PU Flex inokuprintwa ngazo zonke iintlobo zeeprinta ze-inkjet ze-Eco-Solvent, ufumane ukuqina okukhulu ngombala ogcina umfanekiso, hlamba-emva kokuhlamba.
I-Eco-Solvent Printable Vinyl (i-HTV-300S) isekelwe kwifilimu ye-polyvinyl chloride eveliswe ngokomgangatho we-EN17 kunye ne-adhesive eshushu enyibilikayo kumgca wefilimu ye-polyester, ukusika okugqwesileyo kunye neempawu zokhula ...
2021 ReChina Asia Expo, May 19-21, Shanghai
I-ReChina Expo ibanjwa minyaka yonke e-Shanghai ukususela ngo-2004. Njengomnye weziganeko ezibaluleke kakhulu kubashicileli kunye noshishino lwezinto ezidliwayo, i-ReChina Expo ivunywa kakuhle ngabangaphakathi kwishishini ...
Umboniso weDPES waseTshayina wowama-2021
2021 DPES Guangzhou International Advertising Exhibition, DPES Sign Expo China 2021 Hall Miboniso: Poly World Trade Centre Expo, Guangzhou Poly World Trade Centre Expo Idilesi: Poly World Trade ...
Umboniso wethu weCase Study
Ividiyo yeNdaba kunye neMisitho